Fanaovan-tsakafo enti-manolotena manolotra fiadanana ho an'ny mpandeha
Ny Airline Quality Rating (AQR), izay mandalina ny fahombiazan'ny kalitaon'ny serivisy amerikana, dia nahatsikaritra fa ny saran-dalan'ny entana dia nahatratra 3.24 isaky ny mpandeha 1 000 tamin'ny taona 2015 ka hatramin'ny 2.70 isaky ny mpandeha 1 000 tamin'ny taona 2016. Ny kitapo mishandled dia ahitana fitarainana ho an'ny very , kapoka, simba, na tratra.
Saingy ny isa dia tsy mampaninona raha nangalarina ny kitapo nandritra ny dianao.
Ary izao no miditra ao amin'ny serivisy fiarovana fiambenana fiarovana.
Ny toeram-pivarotana azo antoka dia hita any amin'ny ambaratonga fiaramanidina eo an-dalantsa akaikin'ny seranan-tsokosoko any amin'ireo seranana 54 any amin'ny firenena 17. Ny toeram-piantsonana dia misy milina natao hanamboarana sy hiarovana ny entana amin'ny fampiasana horonantsary plastika avo 100 isan-jato ao anatin'ny segondra monja, tsy misy poizina, tsy misy poizina.
"Ny fanamafisana ny tranokala dia fanalàm-baraka tahaka ny mpangalatra mitady tanjona mora kokoa rehefa miezaka mamindra amin'ny valizy", hoy i Gabriela Farah-Valdespino, tale lefitra momba ny varotra. "Izy io ihany koa dia vahaolana mazava tsara izay miasa toy ny fanairana mba hampandre ny mpandeha iray izay nilalao ny entany niaraka tamin'ny entany."
Raha misy olona mitady hiditra ao amin'ny entana, dia tsy maintsy manapaka ilay horonantsary izy ireo, hoy i Farah-Valdespino. "Raha vantany dia tapaka ny plastika dia mihodina avy hatrany, mamorona lavaka ao anaty horonantsary izay tsy azo afenina. Ireo lavaka ireo dia toy ny fanairana na fanondroana fa nisy olona niezaka ny hiditra ny entanao. "
Ny rafitra fiarovana azo antoka dia tsy manakana fotsiny ny entana entina, fa koa miaro amin'ny zavatra, toy ny zava-mahadomelina na vola, napetraka ao anaty entana, hoy i Farah-Valdespino. "Raha mitaky ny kitaponao ianao rehefa tonga any amin'ny toerana misy anao miaraka amin'ireo zavatra tsy nodinihinao, dia mety hitarika amin'ny olana ara-dalàna," hoy izy.
"Tsy mahazatra ny mpizara entana any amin'ny firenena sasany mba hampiasa mpandeha mba hamindra ireo zavatra tsy ara-dalàna tsy fantatra."
Raha misy mpanjifany tonga any amin'ny toerana misy azy farany ary manamarika ny plastika dia voakilasy, dia hanosika azy ireo hijery ny votoatiny amin'ny fangatahana entana, hoy i Farah-Valdespino. "Afaka mameno tatitra momba ny entana miaraka amin'ny seranam-piaramanidina tsirairay ao amin'ny seranam-piaramanidina ireo mpanjifantsika, fa tsy rehefa tonga any an-trano na any amin'ny hotely izy ireo ary mahamarika fa misy zavatra tsy ampy," hoy izy. "Ny serivisy azo antoka koa dia miaro ny ivelany amin'ny valizy mandritra ny fiarandalamby avy amin'ny alatsinainy sy ny scratches, ny akanjo sy ny riaka ary ny fahasimbana amin'ny toetr'andro ratsy."
Ao amin'ireo toerana 54 azo antoka ao amin'ny Secure Wrap, dia misy seranam-piaramanidina amerikanina telo - Miami International , JFK ary Houston's George Bush Intercontinental. "Ny fiarovana azo antoka dia mahomby indrindra rehefa manana volavolan-dàlana goavana avy amin'ny iraisam-pirenena ny seranam-piaramanidina - izany dia raha avy amin'ny seranam-piaramanidina ny mpizahantany iraisam-pirenena ary mijery ny entany", hoy i Farah-Valdespino. "Vondron'ireo seranam-piaramanidina Amerikana no atody na fiaramanidina fandaterana betsaka, noho izany dia tsy mahasoa ny mpandeha ny tolotra ataontsika satria tsy afaka manararaotra izany."
Ny mpandeha any Etazonia dia mahatsapa fa ny safidiny dia matanjaka kokoa any Amerika noho ny mandeha any ivelany, hoy i Farah-Valdespino.
"Ireo mpandeha dia tsy mahatsapa fa ny fotoana rehetra manadino ny entanao, na aiza na aiza ny firenena, dia misy ny fahafahana mangalatra sy manipika."
Saingy tsy toy ny any amin'ny firenen-kafa, izay misy ny tena loza mety hitranga aty anaty aterineto fa ny tranon'ireo mpandeha dia hisokatra ary mety haka, hoy i Farah-Valdespino. "Maro amin'ireo mpandeha no tonga any Etazonia mba handray ireo entana manan-danja na ilaina ilaina any an-trano ary tsy afaka mampitondra azy ireo hiala ao anaty kitapo izy ireo na koa misy zavatra tsy natao ho toy ny milina", hoy izy nanamarika.
Ny mpandeha Amerikana dia mety ho sahiran-tsaina amin'ny fanadiovana ny kitapon'izy ireo avy amin'ny fitondram-panjakana misahana ny fiarovana , hoy Farah-Valdespino. "Ny Secure Wrap no hany tompon'andraikitra nahazo alalana tamin'ny TSA any Etazonia ary niasa niaraka tamin'ny masoivoho nanomboka tamin'ny taona 2003," hoy izy.
"Manolotra fanamiana maimaim-poana isika amin'ny fikarakarana ny entam-barotra amin'ny mpandeha iray amin'ny TSA amin'ny fanaraha-maso faharoa."
Ho an'ny fiarovana bebe kokoa, ny Secure Wrap dia mametraka kaody QR manokana tokana amin'ny kitapo rehetra mihidy, hoy i Farah-Valdespino. "Ny mpanjifa dia afaka manoratra ny fampahalalam-baovao amin'ny QR code ary raha misy ny fatiantoka dia azo havaozina izy ireo," hoy izy.
Ny Airlines dia afaka mijery ny code Secure Wrap QR mba hahazoana ny fampahalalana ny mpandeha. "Very ny kitapo raha tsy voafehy ny andian-tserasera, ka mahatonga azy ireo tsy hanana hevitra hoe iza izy io. Amin'ny famakiana ny QR QR amin'ny finday dia ahafahan'izy ireo mahazo ny anaran'ny mpandeha, ny mailaka, ny laharan-tariby ary ny fialana an-tanindrazana mba hanangona azy ireo any amin'ny entana very entiny, "hoy izy.
Ny Secure Wrap dia mitentina $ 15 ho an'ny entana tsy tapaka ary 22 dolara amin'ny zavatra tsy ara-dalàna na oversized, toy ny kodiarana, kodiarana, bisikileta ary televiziona. "Koa satria ny vokatra dia mihasimba na alahelo, ny kitapo dia mety ho tavela irery. Rehefa feno ny kitapo eo anoloanao dia manampy anao hanana fiadanan-tsaina fa azo antoka mandritra ny diany izany, "hoy i Farah-Valdespino.
Ny Bargain-n'ny Manan-tsambo Saika Azon'ny Olona Rehetra
8 Fahadisoana mahomby amin'ny fiaramanidina avaratr'izany
Fomba 10 hanatsarana ireo soso-kevitra ho azonao
Fitsipika momba ny Airtel Ticketing ho an'ny ankizy
Araho ireo fepetra momba ny etikety momba ny fiaramanidina amin'ny fiaramanidina mahafinaritra
Inona no tokony hividianana kitapo amin'ny kitapo miaraka amin'ny ankizy
Ny fialan-tsasatra dimy tsara indrindra ao Hong Kong ao Hong Kong
Zavatra atao amin'ny lohataona any Texas
Anarana iombonana amin'ny teny koreana
Sehatrizay any Cape Point mahafinaritra any Afrika Atsimo
Maps of Countries of the Eastern Europe
Ny vahoaka mpanan-karena indrindra any Nevada
Ny tatitra dia mampiseho ireo Apps fitsangatsanganana sy ratsy indrindra
Manandramana ny Tandrefana Amin'ny 'Jingle Rails'
Trulli Hotels, Apartments, Bed and Breakfasts near Alberobello
Falls Church, Parade and Festival Festival Memorial VA 2017
Manaova fanatanjahantena Hong Kong ho an'ny hotely
Top 2017 Caribbean Break Break Destinations